केहि महिना अगाडी दुर्घटना परेकी रोशना रामु दामु दुर्घटना अघि कुनै फिल्मको नायिका भन्दा कम थिइनन् , हेर्नुस २० फोटोमा (भिडियो) – Etajakhabar
शनिबार, फाल्गुण ११, २०७५ | Saturday, Feb 23, 2019
केहि महिना अगाडी दुर्घटना परेकी रोशना रामु दामु दुर्घटना अघि कुनै फिल्मको नायिका भन्दा कम थिइनन् , हेर्नुस २० फोटोमा (भिडियो)
काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालको २०१ नम्बर शैयाबाट न्यायको याचना गरीरहेकी उनी रोशना रामुदामु । अस्पतालको शैयाबाटै हाम्रो कार्यक्रममा स्काइप मार्फत नेपाल प्रहरीको गाडीले आँफुलाइए ठक्कर दिएर उपचारमा वेवास्ता गरेको बताएकी थिइन ।
पब्लिक युथ क्याम्पसमा व्याचलर तेस्रो बर्ष अध्ययन गरीरहेकी २० वर्षिय रोशना र उनका दाइ रोनस फागुन १७ गते होलीको दिन मोटरसाइकल सवार थिए । सिनामंगलमा उनीहरु सवार मोटरसाइकललाई कमल पोखरी प्रहरी वृतको बा १ ज ७३२२ नम्बरको सिआरभी भ्यानले ठक्कर दियो । जवान रमन कार्कीले चलाएको भ्यानको ठक्करबाट रोशनाको टाउको पिँठ्यु, कम्मर र खुट्टामा चोट लाग्यो भने उनका दाजुको हात भाँचियो । तत्कालै उनलाई ट्रमा सेन्टर लगिएपनि आइसियु कक्ष खालि नभएको भन्दै नर्भिक अस्पतालमा लगियो । अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च कस्ले र्हेने भन्ने विवादकै कारण सुरुमा त उनको उपचार नै भएन । तर पछि प्रहरीले अस्पताल प्रशासन छलफल गरेपछि करीब ५ घण्टा लगाएर उनको शल्यक्रिया भयो ।
सामान्यतयाह अन्य निजी तथा सार्वजनिक सवारीको ठक्करबाट घाइते भएमा उपचारको सम्पुर्ण खर्च सवारी धनीले गर्ने प्रावधान छ । तर जब प्रहरीकै सवारीको ठक्करबाट घाइते भइन उनको उपचारको खर्च कसले दिने भन्ने नै समस्या सिर्जना भयो । उनी भन्छिन् ।
तर कमलपोखरी प्रहरी वृतका प्रहरी नायव उपरीक्षक कुल दिप चन्दका अनुसार उपचार सुरु गर्नुपुर्व नै सवारी विमाबाट आउने रकम बाहेक अरु परिवारले नै व्याहोर्न मौखिक सहमती भएको थियो । चन्दका अनुसार विमाबाट घाइतेको अवस्थामा प्रति व्यक्ति बढीमा ३ लाख सम्म मात्रै प्रहरीले दिन सक्ने छ । हरेक पल हाँसो ठ्ट्टा गरीरहने, अध्ययनशील उनि सबैकी प्यारी थिइन् । सबै जना होलीको रङमा रमाइरहेको बेला उनको भने जीवननै धरापमा परेको थियो ।
अहिले खतरामुक्त भएपनि विस्ताराबाट उठेर हिँढडुल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफ्नो यो हालात, परीवारको मुहार र प्रहरीको यो व्यावहारले गर्दा उनलाई यो दुर्घटना सपना मात्रै भईदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख १०, २०७५ समय: १७:२१:२८
मध्य रातमा ललितपुरमा रुवाबासी : मान्छेको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर छरियो – भयो बम विस्फोट…(हेर्नुहोस् भिडियो)
पत्रकारलाई धम्कि दिने सावित्री सुबेदीको भित्री कर्तुत सबै पर्दाफास गरे दिल निसानिले,हेर्नुहोस चकित पार्ने भिडियो
अन्तत नेपालमा बन्द हुने भयो यूट्युब र फेसबुक, कारण यस्तो गम्भीर छ, ओली सरकारको खतरनाक निर्णय
अर्कै जेलमा सरुवा गरिदिने धम्की दिएर घुस लिएको आरोपमा पक्राउ !
पिपिएलमा नेपाली ठिटाे सन्दीपलाई पहिलो खेलमै तीन विकेट
पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार अन्तिम चरणमा , छिट्टै पाइपबाटै पेट्रोल ल्याइने
चिनियाँ राष्ट्रपति सि र साउदी युवराजबीच भेटवार्ता
गयो शक्तिसालि भूकम्प
काठमाडौँको कमलपोखरीमा पनि प्रेसर कुकर बम फेला
यति राम्रा दुई छोराका बुवा हुन्- शिशिर भण्डारी ! ८ बर्षअघि प्रेम बिवाह गरेको खुलाशा (भिडियो हेर्नुस)
वीर अस्पतालको भवनमा लिफ्ट चुडिँदा २ जनाको मृत्यु , १ गम्भीर घाइते
लुट कान्छा काण्ड:केपीले जोक्स सोचे अब परिणाम देख्छन,सावित्री सुबेदीको पर्दाफास,सावित्री सुबेदी ठग भन्दै बोले मिडियामा